कांग्रेसले तोक्यो महाभारत गाउँपालिकामा अधिवेशनको मिति – मिलिजुली खबर
कांग्रेसले तोक्यो महाभारत गाउँपालिकामा अधिवेशनको मिति
in गृहपृष्ठ, राजनीति, समाचार, समाज
कांग्रेसले काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा अधिवेशनको मिति तोकेको छ । आज निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र कुमार लामिछानेले एक विज्ञप्ति मार्फत नयाँ मिति तोक्नु भएको हो ।
फर्सी १४ गते अधिवेशनको मिति तोकिएको हो । यसअघि असोज ९ गते तोकिएको मितिमा विशेष कारण जनाउदै मतदान अधिकृत अधिवेशन स्थगित गरेका थिए । नेताहरूको गुटगत भन्दा पनि निर्वाचन समितिकै कमजोरीका कारण महाभारत गाउँपालिकामा कांग्रेसको अधिवेशन रोकिएको थियो ।
कांग्रेसले काभ्रेले जिल्लाको १३ मध्ये १२ वटा स्थानीय तहमा अधिवेशन सकाएको छ । जसमा पूर्व जिल्ला सभापति शिव हुमागाई समूहले बर्चस्व कायम राखेको छ । सभापति मधु आचार्य समूहको कन्तबिजोग देखिएको छ ।
असोज ५ गते सकिएको वडा अधिवेशनबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिका आधारमा तर्सेको आचार्य प्यानलले पालिका अधिवेशनको पूर्वसन्ध्या शुक्रबार अधिवेशन नहुने भन्दै प्रोपोगाण्डा मच्चाएको थियो । राति अबेर निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र लामिछानेले कुनै कारणले अधिवेशन नरोकिने जवाफ दिएपछि महाभारत गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन सकिएको छ ।
पालिका अधिवेशनबाट पूर्व सभापति हुमागाई प्यानलले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । शनिबार भएको १२ वटा स्थानीय तहको अधिवेशनमा शिव हुमागाईं प्यालनबाट पनौती नगरसभामा रामशरण भण्डारी, नमोबुद्ध नगरसभापतिमा कुन्साङ लामा, भुम्लु गाउँपालिका सभापतिमा दावा लामा, रोशी गाउँपालिका सभापतिमा दूधराज लामा र चौरीदेराली गाउँपालिका सभापतिमा शेर बहादुर तामाङ सर्बसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ ।
मधु आचार्य प्यानलबाट पाँचखाल नगरसभामा सञ्जय तामाङ र खानीखोला गाउँपालिका सभापतिमा दोर्जे जिम्बा मात्रै निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।बेथानचोक गाउँपालिका सभापतिमा मधु आचार्य प्यानलका मछिन्द्र कुमार लामालाई पछि पार्दै हुमागाई प्यानलका प्रेम बहादुर तिमल्सिना विजयी हुनुभएको छ ।
तेमाल गाउँपालिका सभापतिमा आचार्य प्यानलका हेमलाल लामालाई पछि पार्दै हुमागाई प्यानलबाट ज्ञान बहादुर लामा विजयी हुनुभएको छ । ज्ञान बहादुर तामाङले १४४ मत पाएर विजयी हुनुभएको हो ।
हेमलाल तामाङ १४ मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ ।
४ मत बदर भएको छ ।
धुलिखेल नगरपालिकामा पनि हुमागाई प्यानलका बिदुर बहादुर बस्नेत नगरसभामा निर्वाचित हुनुभएको छ । आचार्य प्यानलका मञ्जु कुमार कोजु पराजित हुनुभएको छ । धुलिखेलमा बस्नेत १२२ मत पाउँदा कोजुले ८५ मत प्राप्त प्राप्त गर्नुभएको छ । ८ मत बदर भएको थियो ।
बनेपा नगरपालिकामा एक मत अन्तरले शिव हुमागाईं प्यालनबाट महेश कुमार कर्माचार्य विजयी हुनुभएको छ । आचार्य प्यानलका शान्ति रत्न शाक्य पराजित हुनुभएको छ ।
भोलिदेखि धुलिखेल नगरपालिकाका सबै विद्यालयलाई भौतिक रूपमा पठनपाठन गर्न निर्देशन
उग्रतिर्थ साकोसका सचिव शान्तमणि रिजाल गाेल्डमेडलद्वारा सम्मानित
काभ्रेभञ्ज्याङमा भयानक दुर्घटना
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार
चौरीदेराली गाउँपालिकामा जागिरे हुन माओवादी नै हुनुपर्ने ?
भक्तपुरबाट महिला मन्त्रालयको गाडीभित्रै यौन क्रियाकलापमा संलग्न ३ जना प’क्राउ
२४ असार २०७८, बिहीबार
काभ्रे कांग्रेसमा गणेश लामा पक्षका क्रियाशील सदस्यको नाम काटिँदा वडा अधिवेशन रोकियो
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार
गोकुल बाँस्कोटा एमाले सचिबमा सर्वसम्मत !
गोली हानेर अपहरणकारी पक्राउ, बालकको सकुशल उद्धार
शर्मिला नेपाली २० वर्ष देखि बाख्राको खोरमा
गायक सुमन के.सी. को रहेको ”जीन्दगी यो” सार्वजनिक
काभ्रे काँग्रेस अधिवेशन: मत गणना गर्ने तयारी
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार
काभ्रे काँग्रेसको जिल्ला अधिवशेनः मतदान सकियो, लामा र पौडेलमा को बालियो ?
स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखियो ? धुलिखेल नगरबासीले यी ५ नम्बरमा सम्पर्क गर्नुस्